ISITRATO IHORATIO - IIFLETHI - I-Airbnb
ISITRATO IHORATIO - IIFLETHI
Queen bed | ubuninzi beendwendwe ezi-2
Efumaneka eHoratio St, sinikezela ngeflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla eMudgee, enesitayile esivulekileyo esinefenitshala entle yale mihla. Iflethi nganye inabantu abayi-2.
Ezi flethi okanye izindlu ezikwicomplex zenziwe zayisebenzisa ngokupheleleyo indawo efumanekayo. Yonke into enokufunwa lundwendwe iqukwe kakuhle, kwaye uyilo olucocekileyo lwale mihla lwenza le nto ibe nomtsalane kakhulu.
IMudgee Apartments lishishini lentsapho yasekuhlaleni, eliyiflethi okanye izindlu ezikwicomplex needilesi ezahlukeneyo. Njengokuba ndingumakhi wasekuhlaleni othanda ukuhamba, ndenza, ndakhe ndaza ndadibana neeflethi eziseHoratio St ngokungathi zikwindawo endinokuthanda ukuhlala kuyo nazo zonke izinto ezongezelelekileyo nezangasese. Ndiyazidla ngezi flethi okanye izindlu ezikwicomplex kwaye ndiyivuyele kakhulu ingxelo entle yokuba bekunjani. Ezi zigqitywe ngoAprili 2018 kuphela.
Siceba ukwakha ezinye iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinezicelo zokwakha amagumbi okulala amabini afana neeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziseHoratio St ukuze abantu abathandanayo okanye iintsapho bahambe baze bonwabe. Ngoko hlala ulindile.
Enkosi ngokufunda isenzo sethu. Sikhangele phambili ekukwamkeleni kwixesha elizayo.
4.93 · Izimvo eziyi-114
Ummandla weMudgee likhaya leediliya ezingaphezu kwe-50 ezaziwayo kunye neendawo zewayini ezivelisa iwayini ebomvu namhlophe ezininzi ezinomnyango wegumbi kunye nokungcamla iwayini ekhoyo (kuquka iwayini ephilayo).
Ngenkcubeko yeekhefi ephithizelayo kunye neevenkile zokutyela zokuqala uya kusoloko ufumana into entsha nevuyisayo onokuyifumana kwiKhalenda yonyaka yamatheko eMudgee Region entle!
Kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex, sisebenzisa kuphela iwebhsayithi, i-imeyile kunye nemiyalezo ukususela ngexesha lokubhukisha, ukuqinisekisa, iikhowudi zokufika nokubhalisa xa ufika. Nangona sikufowunela ukuba unemibuzo.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-25470-3